Virtualization - Teknolojia misy amin'ny 2019 | Avy amin'ny Linux
Virtualization ny rafitra miasa: Teknolojia misy amin'ny 2019
Ny Virtualization of Operating Systems (OS) amin'ny ankapobeny dia mirakitra ny fahaizana mizara amin'ny Hardware iray ihany Operating Systems miasa amin'ny fomba mahaleo tena tanteraka. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny rindrambaiko virtualization, izay misy maro eo amin'ny tsenan'ny solosaina ary misy safidy hafa maimaim-poana sy manan-tompo.
Ny haitao rehetra misy amin'izao fotoana izao dia manana ambaratongam-pahasarotana samihafa amin'ny fametrahana azy, ny fametrahana azy, ny fampiasana azy ary ny fahazoana miditra ary ny fahazoana miditra amin'ireo antontan-taratasy ilaina hifehezana azy ireo. Saingy ny rehetra dia mifantoka amin'ny fanamorana amin'ny volana Mey na latsaka ny virtualization saika OS tsy miankina na maimaim-poana (vahiny) OS (mpampiantrano), mba hitsapana saika ny OS rehetra fa tsy mila kapila mafy.
1 Zava-dehibe ny virtualization
2 Tombony azo amin'ny Virtualization
3 Ny fatiantoka ny Virtualization
4 Teknolojia Virtualization
Zava-dehibe ny virtualization
Na ny fanaovana virtoaly OS feno na rindranasa 1 na maromaro fotsiny dia ilaina tokoa ny virtualisation satria mamela antsika hanitatra ny fahafaha-manao sy ny fahafaha-manao ao anatin'ny sehatray (solosaina / tamba-jotra) ankehitriny.
Ho an'ireo rehetra miasa na mankafy ny Teknolojia dia tena zava-dehibe tokoa ny fanavaozana ny vanim-potoana miaraka amin'ireo fiovana nitranga tao., na hampitombo ny fivelarana matihanina, hanatsarana ny famokarana asa na hanamorana ny fianarana sy / na ny fampianarana ny farany amin'ny siansa amin'ny solosaina.
Mpankafy solosaina, mazàna mpampiasa an-trano izay mampiasa OS iray mazàna te hianatra hampiasa na hampiasa ny tombotsoan'ny OS fantatra hafa na tsia, nefa tsy mila mampiasa format amin'ny solosainao.
Ary ny teknolojia ahafahana manao izany dia ny Virtualization of Operating Systems, izay amin'ny ankapobeny dia afaka mizara mitovy amin'ny HW Operating Systems izay miasa amin'ny fomba mahaleo tena tanteraka.
Ny haitao HW ankehitriny dia nahatonga ity haitao ity hivoatra be, izany hoe ireo fampiharana manohana azy, izay mamela antsika hiasa Rafitra fiasa iray na maromaro tsy mitovy amin'ny antsika sy ny antsika, miaraka amin'ny heriny tena izy ary indraindray aza mitovy na lehibe kokoa noho ny hoe napetraka mivantana tao amin'ny HW-tsika.
Tombony azo amin'ny Virtualization
Mitahiry fandaniana amin'ny vidin'ny fitaovana ara-batana vaovao.
Hamafiso ireo olana momba ny fampifanarahana programa
Mitahiry ora / asa amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny rafitra mafana.
Mitahiry ora / asa amin'ny fifindra-monina rafitra mafana
Fanamorana ny fampiharana ny tontolon'ny fitsapana
Hatsarao ny fitokanana ny Fitaovana, Fampiharana ary Serivisy
Hatsarao ny fiarovana sy ny mombamomba ny fidirana manokana amin'ny Equipment and Systems
Fifanentanana sy hakingana hamerenana amin'ny laoniny ny Fitaovana, Fampiharana ary Serivisy.
Ny fatiantoka ny Virtualization
Fiverenana ambany azo atao
Fepetra mety hitrandrahana
Asa mihabe noho ny fiparitahan'ny MV
Fampitomboana risika noho ny fampifangaroana ny MV
Loza amin'ny tsy fitoviana na tsy fanarahan-dalàna ny endrika VM
Ny teknolojia virtualization misy dia mampiasa ilay fantatra amin'ny anarana hoe "Hypervisor" na "Virtual Machine Monitor (VMM)", izay tsy inona fa ny Virtualization Platform mihitsy, izany hoe ny haitao mamela antsika hampiasa, miaraka amin'izay koa, OS marobe amin'ny mpampiantrano mpampiantrano (Physical Server).
Amin'izao fotoana izao, ny Hypervisors dia azo sokajiana ho karazany roa:
Karazana 1 (tera-tany, metaly bitika): Ireo Hypervisors ireo dia vahaolana amin'ny lozisialy novonoina mivantana tamin'ny tena HW an'ny mpampiantrano mpampiantrano (Physical Server) hifehezana ny HW sy hanaraha-maso ny OS virtoaly marobe. Ny rafitra virtoaly dia mihazakazaka amin'ny ambaratonga hafa ambonin'ny Hypervisor.
Ny sasany amin'ireo Hypervisors Type 1 malaza kokoa dia ireto manaraka ireto:
Ny karazana Hypervisors 1 dia mety misy karazany roa:
Type 2 (Hosted): Ireo Hypervisors ireo dia vahaolana amin'ny lozisialy izay mandeha amin'ny OS mahazatra (Linux, Windows, Mac OS) hananganana virtoaly ny Operating Systems hafa. Amin'izany fomba izany, ny virtualisation dia miseho amin'ny sosona iray lavitra ny HW raha ampitahaintsika amin'ny hypervisors karazana 1. Raha ny lojika dia mahatonga ny fampisehoana ho ambany kokoa amin'ny hypervisors karazana 2.
Ny sasany amin'ireo Hypervisors Type 2 be mpampiasa indrindra dia ireto manaraka ireto:
Masinina virtoaly mifototra amin'ny Kernel (KVM)
VMware: Workstation, Server, Player ary Fusion
Redization amin'ny orinasa Hat Hat
Amin'ny literatiora sasantsasany, ny Virtualization Hybrid dia matetika voatonona, izay, araka ny anarany, dia misy ny fampiharana ao anatin'ny mpampiantrano ara-batana mitovy ireo karazana 2 amin'ny Virtualization an'ny Operating Systems voalaza etsy ambony. Ireo haitao virtoaly malaza fanta-daza mendrika hotononina dia ireo izay matetika mifandraika amin'ny rahona na Containers. Anisan'ireny ny:
Virtualization amin'ny fitoeran-javatra
Ny famaritana izay karazana Teknolojia Virtualization no tsara indrindra dia miankina amin'ny filàna sy ny maodelin'ny orinasan'ny fikambanana iray ary ny fahaizan'ny IT Personnel miasa ao. Fa raha fintinina dia azo marihina fa ny hypervisor type 1 dia haingana kokoa noho ny hypervisor type 2, satria ny voalohany dia miresaka mivantana amin'ny HW an'ny mpizara. Ny Hypervisor Type 1 dia tsy mila miatrika ny OS sy ny sosona maromaro izay mampihena ny fahaizan'ny Hypervisors nampiantrano.
Famaranana fa amin'ny karazana Hypervisor 1 dia hahazo fahombiazana sy fahaiza-mitombo ary fitoniana tsara kokoa isika. Saingy, mifanohitra amin'izany no ananantsika, miaraka amin'ity karazana haitao virtoaly ity, ny HW tohana dia voafetra kokoa satria izy io dia natsangana miaraka amina mpamily voafetra ary sarotra kokoa ny fampiharana azy.
Mandritra ny Type 2 Hypervisors izay malaza sy fantatry ny besinimaro ary nanafaingana ny hetsika virtualization dia lasa mifanentana bebe kokoa ianao satria manana matrix HW malalaka izy ireo, satria mampiasa virtualization miorina amin'ny rindrambaiko izy ireo. Ohatra, ny Type 2 Hypervisor dia azo apetraka amin'ny solosaina finday mora vava kokoa noho ny Type Hypervisor.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Virtualization: Teknolojia misy amin'ny 2019